0 Saturday December 14, 2019 - 16:41:31
Maxkamad kutaal magaalada Alkhurduum ee caasimadda wadanka Suudaan ayaa xukun ku ridday Jeneraal Cumar Xasan Al Bashiir oo ahaa madaxweynihii hore ee Melleterigu ay talada ka tuureen horraantii sanadkaan.
0 Saturday December 14, 2019 - 11:50:25
Waxaa soo gaba gaboobay doorashooyinkii madaxtinimo ee khamiistii ka dhacay wadanka Aljazaa'ir oo dhaca mandiqadda Maqribul Islaami waqooyiga qaaradda Afrika.
Dab qabsaday Markab nuuca diyaaradaha Xambaara ah oo Ruushku leeyahay.
0 Thursday December 12, 2019 - 15:08:19
Dab xooggan ayaa ka kacay mid kamida Maraakiibta dagaalka ee ugu waaweyn caalamka arrinkaas oo saameyn ku yeelan doono isku dheeli tirnaanta dhanka melleteriga ee u dhaxaysa quwadaha adduunka.
0 Thursday December 12, 2019 - 07:05:38
Xoogagga Jihaadiga Taliban ayaa weerar ballaaran ku qaaday saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin gudaha wadanka Afghanistan.
0 Wednesday December 11, 2019 - 19:56:00
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradad Gaashaandhigga dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in la joojiyay dhammaan tababarradii ay saraakiisha Sacuudiyaanka ah ku qaadanayeen xeryaha tabarrada melleteriga Mareykanka.
Boqolaal Dibad baxayaal ah oo lagu dhaawacay magaalada Baqdaad.
0 Wednesday December 11, 2019 - 07:22:14
Boqolaal qof ayaa ku dhaawacmay rasaas iyo Gaaska dadka ka ilimaysiiya oo lagu weeraray dad dibad baxyo ka dhigayay bartamaha magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq.
0 Tuesday December 10, 2019 - 11:32:08
Xaalad Feejignaan ah oo looga dhawaaqay caasimadda Liibiya.
0 Monday December 09, 2019 - 19:30:07
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in xaala deg deg ah looga dhawaaqay magaalada caasimadda ah ee Daraabulis kadib markii ay soo bexeen in duullaan kudis ah lala maaganyahay magaalada.
0 Monday December 09, 2019 - 11:28:01
Allaha unaxariistee waxaa isbitaal kuyaal magaalada Al Qaahira ee wadanka Masar ku geeriyooday Sheekhii caalimka ahaa Fowzi Assaciid oo kamid ahaa culimada ugu waaweyn wadanka Masar.
0 Sunday December 08, 2019 - 14:52:45
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in tobanaan qof shacab ah dhinteen tira kalane ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dowladda Ruushka ay duqeeyeen guryo dad shacab ah deganyihiin.
0 Saturday December 07, 2019 - 09:28:37
Nin Sacuudiyaan ah oo toogasho ku dilay 3 Askari American ah.
0 Saturday December 07, 2019 - 08:57:03
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weerar hubeysan oo ka dhacay saldhigga ugu weyn ee ciidanka badda Mareykanka leeyihiin.
Toogasho Askar American ah lagu dilay oo ka dhacday gobolka Hawaii.
0 Thursday December 05, 2019 - 13:41:30
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashaya toogasho ka dhacday mid kamida saldhigyada ugu waaweyn dalka Mareykanka.
0 Wednesday December 04, 2019 - 11:10:48
Dowladda Qadar ayaa ku dhawaaqday in martiqaad rasmi ah ay ka heshay Hoggaamiyaha Boqortooyada Sacuudiga oo ah dal khilaaf xooggan kala dhaxeeyo muddo sedax sanadood ah.
Weerar Askari lagu dilay oo ka dhacay gudaha magaalada Dhuusamareeb.
0 Tuesday December 03, 2019 - 20:48:12
Xiisado u dhaxeeya maleeshiyaad kawada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagasoo sheegayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud.
Qarax 23 qof ay ku dhinteen oo ka dhacay wadanka Suudaan.
0 Tuesday December 03, 2019 - 20:44:40
Ugu yaraan 23 qof ayaa dhintay tobanaan kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax xooggan uu ka dhacay Warshad kutaal magaalada Al Khurduum ee caasimadda wadanka Suudaan.
0 Monday December 02, 2019 - 11:33:19
R/Wasaarihii Dowladda Shiicada Ciraaq oo iscasilaad ku dhawaaqay.
0 Saturday November 30, 2019 - 20:57:17
Caadil Cabdil Mahdi oo ahaa R/wasaarihii xukuumadda Shiicada Ciraaq ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu iska casilay xilka Raysal wasaaranimo.
Jeneraal Yuusuf Cageey oo si lama filaan ah Muqdisho loogu dilay.
0 Saturday November 30, 2019 - 20:41:58
Toogasho ka dhacday xaafadda Warshadda Caanadaha ee degmada Hodon magaalada Muqdisho ayaa sababtay dhimashada sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada Melleteriga dowladda Federaalka.
Ciidamo katirsan Melleteriga Turkiga oo lagu dilay weerar ka dhacay Xuduudda Suuriya.
0 Thursday November 28, 2019 - 12:48:43
Melleteriga dowladda Turkiga ayaa markale weerar khasaara dhaliyay kala kulmay maleeshiyaadka Kooxda Kurdiyiinta PKK ee ka dagaallama wadamada Suuriya iyo Turkiga.
0 Thursday November 28, 2019 - 12:37:05
Dhulgariir ay ku dhinteen 20 qof oo ka dhacay wadanka Albania.
0 Wednesday November 27, 2019 - 10:42:37
Tobanaan qof ayaa dhintay boqolaal kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dhul gariir xooggan ku dhuftay wadanka Albaaniya oo dhaca Koonfur Bari qaaradda Yurub.
0 Wednesday November 27, 2019 - 10:07:49
13 Askari Faransiis ah oo ku dhintay wadanka Maali xilli ay dagaal kula jireen Dagaalyahanno Katirsan Al Qaacidda.
0 Tuesday November 26, 2019 - 12:31:57
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada Faransiiska kasoo gaaray dagaalka ka holcaya wadanka Maali ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Xoogag Jihaadi ah oo Weerar Hubaysan ka fuliyay gudaha Wadanka Burkina Faso.
0 Tuesday November 26, 2019 - 12:08:06
Xoogagga Jihaadiga ah ee JNIM ayaa weeraro hor leh ka fuliyay gudaha wadamada Maali iyo Burkina Faso oo dhammaantood dhaca mandiqadda Saaxilka ee galbeedka qaaradda Afrika.
0 Thursday November 21, 2019 - 11:08:01
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in xoogaga kacdoonka ay guulo muuqdo ka gaareen dagaallo ay lagaleen ciidamada Bishaar Al Asad iyo kuwa Ruushka.
0 Wednesday November 20, 2019 - 21:32:31
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in xiisada colaadeed ay ka oogmeen degmada Beled Xaawo ee dhacda xuduud beenaadka ay Soomaaliya la wadaagto dalka Kenya.
0 Wednesday November 20, 2019 - 10:53:00
Maamulka Yahuudda ayaa markale duqeymo baahsan ka geystay gudaha wadanka Suuriya ee dhaca mandiqadda Shaam.
Dowladda Itoobiya oo Faransiiska ka dalbatay in uu ka iibiyo Sawaariikh Niyugleer ah.
0 Tuesday November 19, 2019 - 17:01:04
dowladda Itoobiya waddaa hub aruursi ay ugu diyaar garoobayso dagaal dhanka cirka ah oo ay lagasho dowladaha uu murunka dhanka biyaha kala dhaxeeyo.
0 Tuesday November 19, 2019 - 09:54:39
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in weerar hubeysan oo ka dhacay badda gunteeda lagu qafaashay maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye.
0 Saturday November 16, 2019 - 18:54:58
0 Saturday November 16, 2019 - 09:28:31
0 Thursday November 14, 2019 - 09:48:19
ku dhowaad 40 qof oo Falasdiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeymihii wuxuushnimo ee diyaaradaha dagaalka Yahuudda ay ka geysteen magaalada Gaza ee dalka Falasdiin.
0 Wednesday November 13, 2019 - 11:25:52
0 Tuesday November 12, 2019 - 10:03:24
Diyaaradaha dagaalka Yahuudda ayaa duqeymo khasaara dhaliyay ka geystay magaalooyin katisan dalalka Falasdiin iyo Suuriya oo dhammaantood dhaca mandiqadda barakeysan ee Shaam.
« Prev1234567 ... 36Next »